JAALALA ONNEERRATTI CHAAPPEEFFAME – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Dn. Mulugeetaa Ayyaaleew
Ani nama biyya Maqdalooni; cubbuu baay’ee kan na hojjechiisan afuurota hamoo gosa torbatu narratti walga’anii nagidirsaa turan. Namaa gadi ta’ee akka nama maraatuttan lakkaawwamee jiraadhan ture. Kan fagootti na dheessu malee; natti dhiyaatee rakkina koo nagaafachuuf kan nadubbisu, ana wajjiin kan nyaatee dhugu mitii, ayii yaa intala kana jedhee sobee kan hidhii naaf xuuxu namni biyya koo tokko illee hin turre. Maatiin koo nanuffanii, natuffatanii nadhiisanii jiru. Bakkan fedhe oolee yoon bules; jiraadhee dhiisees anaaf namni dhimma qabu tokko illee hin jiru; silas maatiin koo tuuffatanii yoo nadhiisan ormi maal godhi naan jedha?
Jiraattonni biyya Maqdaloon fagoodhaa yommuu na argan; “Ilaalaa, baattuun seexanaa sun nutti dhufte, dhufte kunooti kunooti” jechaa quba natti qabanii najalaa baqatu. Guyyaa tokko daandiirraa daandiitti jooraa, yoon barbaades akka harraagessaatti iyyaa, akka waraabessaattis yuusaa, akka sareettis dutaa osoon deemuu; fuuldura kootii namoonni baayyeen kan duuba yaa’aa jiran; namni umriin isaa naannoo woggaa soddomaatti tilmaamamu, miidhaginni bifasaas madaala kamiinuu kan hin ibsamne garakoo yommuu dhufaa jirun arge (Faar. 44፥2). Akka nama fayyaa qabuu qalbiin xinnoo natti deebi’een; dhaabbadhee hubadheen ilaale akkan waan nama beekuu natti fakkaatee; foonkoo wallaaltus lubbuunkoo ni beekte. Namni kun fuulli isaa ifaa gara kootti dhufaa jira. Gara kootti seeqaa/fuullisaa ifaa osoo hin gaddin, maraattuu, jibbamtuu jedhee osoo na hin tuuffatin, osoo na hin balfin kan garakoo dhufe namni Inni jalqabaa Isa qofa. Na ajaa’ibee bakkan dhaabbadhee hin sossoone; gidduma kanaan namni kun “Isin afuurota hamoo isiniinan jedha ba’aa” jedhe namni sun sagalee humna cimaa adda ta’e qabu tokkoon. Humni afuurichaa keessa koo lixee; yeroo nasakatta’u natti beekama. Qeensa miilakootii eegalee hanga rifeensa mataa kootitti na weerare. Wanti adda ta’e tokko akkan waan uffata guutuu baafadheetti yeroo narraa duguuggamee ba’uu fi sammuunkoo yommuu akka waan dhiqameetti yommuu qulqullaa’u natti beekkama. Kanan ta’ees yaadees hin beekne nan seeqe; miirri nama ta’uukootii guutumaan guutuutti natti beekkame.
Yommuun ol jedhu reefu garakoo dhufaa kan ture; sagaleewwan qoricha lubbuu of keessaa qaban sana kan dubbate namni sun akkuma fuula isaa ibseen, harka isaa garakootti bal’isee nafuuldura dhaabateera. Uummanni Isa akka mootii kanniisaatti marsee jiru sun hundi ijasaa narraa hin buqqifanne; dhugumas ajaa’ibsiisee ta’a; namni sun ana lakkoofsa namaatti lakkaawwamuu hin qabne waliin dubbachuunsaa; keessi koo imimmaan nahudhe. “Abbaa fi haatikoo nadagatan Waaqayyo garuu na fudhate” (Far.Da.26፥10). Seequun Isaa akkanumaanii miti; seequu kolfaas miti; kan jaalala onnee dhugaa fi kan abbummaati malee. Gara Isaatti kan nama harkisu, kan nama waamuu fi affeeru malee. Maaltu akka dhiibee nadarbe osoon hin beekin daddarbamee deemeen miilasaa jalatti gonbifame; miilasaan dhungadhe. Imimmaankoo osoo cophuun miilasaa irratti gonbifameen hafe. “Maariyaam ka’i cubbuunkee siif dhiifameeraa” naan jedhee harkasaa mirgaanis ol nakaase. Isa duuba dhiirota baay’etu dhaabbatanii jiru; isaan duuba immoo dubartoonni baay’een dhaabbatanii nailaalaa jiru. Anis ka’een isaanitti makame. Sana booda, eenyutu Isarraa adda ba’aree? (Rom 8፥35). Seenaa kana hunduu ni beeka. Garuu kan namuu naaf hin hubanne seenaa tokkon qaba. Gooftaa kootiif, Iyyasuus Kristoosiif jaalalan ani qabu. Mee naaf hubadhaa; dheekkamsa fi gidiraa afuurota hamoo sanarraa, salphina sanarraa, meeshaa taphaa seexanaa ta’uu sanarraa, kan nahiike jaalalan Kiristoosiif qabu, jaalala onnee isa dhugaati. Kan biyyi nadheessu, darbees najibbu, caalaattuu natuuffachaa kanan ture; amma lafa Gooftaankoo oole oolee, lafa Inni bules buluudhaan sagaleesaa akka midhaanii fi bishanii soorachaa nama jedhamee akkan lakkaawwamu kan nataasise; Isa waan ta’eef hamma lubbuunkoo foonkoorraa adda baatutti jaalalli isaa onnee koo irratti chaappeffameera. “Guyyaa keessaa guyyaan dhiphuu fi gidiraan sun dhufte…” Yommuu kana naan jettu mormashee gadi cabsitee, maddiishee lamaanirra imimmaanshee lola’aa Hagayyaa bo’oo keessa lola’u fakkaateera. Sana booda, morma ishee harka ishee lamaan keessa of baaftee, jilbashee irratti addaan gonbifamtee boo’uu eegalte; dhugumaayyuu isaaf jaalala adda ta’e qabdi. Maal haagooturee jaalala Waaqayyoo kan beeku kan dhandhame qofa. Bu’aa qorichaa kan beekuu nama ittiin dhukkuba irraa fayye mitiiree? Barreessituukoo biraannaakoo waliin walqunnamsiiseen ol jettee akka itti naaf fuftu miira laphee cabeenan gaafadhe… Allis mannis callisaan too’atameera. Mana Haadha Maarqoositti kadhannaan taasifamaa waan jiruuf oddoo keessatti sagaleen sokoksu tokkollee hin dhagahamu. Ani Rufiinoos kanan jedhamu barreessaan seenaa fi Maariyaam Maqdalaawit kan jedhamtu haadha seenaa tana faana mana duuba karaa mirgaatiin teenyee jirra. Ol jechuu yaaltee, fuullishee akka duumessa cophuuf ka’ee ulfaatera. Sararri imimmaanshee inni duraa ammas hin badne; ijjishee garmalee diimateera fuullishee daa’ima baala doobbiitiin reebamte fakkaatee horbobbaa’eera.
Guyyaa sana yommuu Isa qaban mana warra Maartaattan ture; Gooftaan immoo faasikaa kabajuudhaaf Duuka Bu’oota wajjiin mana Alaazaar waan tureef, nutimmoo waan nyaataaf ta’u qopheessaa turre. Ganama sana Iyyeruusaalem ni hunkuramti; yeroo gadi baanu naannoo keenya namni tokkollee hin jiru. Yeroo kana hojiin hojjechaa jiru dhiiseen daandii magaalaatti nama geessu qabadheen akka nama bineensi duubaa ari’uuttan fiige. Namoonni baay’een, kaan uffata gatee, kaawwan immoo meeshaa fi muka baatu darbatee, jaartoliin qoraan gurguraaf baatanis ofirraa darbanii humna hin jirre sanaan taraf-taraf- jechaa gara magaalaa walakkaatti gugguufu.
Kuun wal dhiiba, ni kaataa, ni kufa ni ka’a; namni kuun immoo suuta gurratti walitti hasaasa maal jedhun jedha anaaf, hin galle keessikoo garuu baay’ee sodaate; yaadni koo dafee gara Gooftaa nadhaqe. Guyyaa muraasa booda, akka Isa qabanii fi akka Isa fannisan nutti himee tureeyyu… wayyoo yemmuun isa yaadadhu onneekoon boo’aan ture. Maanguddoon tokko ulee hookkoo isaatti hirkatee yemmuu gugguufaa kaatu argeen, itti fiigee maal, maaltu ta’e abbabban jedheen gaafadhe urgufamaa; “Hamma ammaatti hin dhageenyemoo ati?” naan jedhe. Maal! Sagalee sodaa gaddaan guuttameen akka nama qalbiin tuqameen ta’e; “Yakkamaan sun qabamee mitii” kam inni! jedheen hamma onnee nadhoohutti rifadheen dhahannaan onnee koo to’annaa uumamaa irra darbee qomakoo gidduudhaan waan nakeessaa ba’u natti fakkaatee; “Sanikaa Iyyasuus kan jedhaniin” garuu…garuu…garuu… lubbuukoo hin beeku uffanni mormatti maradhe eessatti akka narraa bu’e, kopheenkoo eessatti akka narraa ba’e, miillikoo eessaa fi maalirra akka ejjetu natti hin yaadatamu. Jiraataan Iyyaruusaaleem yeroo sana na arge kunoo; laalaa maaraatumni ishee sun itti deebi’ee? naan jechuu hin oolan. Fuulakoo naannessseen fiige gara mana Alaazaarfaa uummanni wal sukkuuma,wal hunkura wanta dubbatamu hin dhagahu garuu nan fiiga fiigicha qofa. Inni garuu mana Alaazaarfaa hin turre bitaa nagalee eessarraa eessatti akkan fiigaa jirus wallaaleen akka nama dhaabbatuun ta’e; qaamnikoo guutuun ni urgufama onneen koo nidhahatti hidhi imimmaan kootii hiikkateera Gooftaa kiyya, Gooftaa kiyyan jedha irra deddeebi’ee; “Eessabbaasaa gatiisaa laataniif ” jecha jedhu dhagaheen gara mirga kootti yemmuun naanna’u Fariisichi tokko namaddii dhaabatee jira. “Eessa geessan?” jedhaan isa maddii kan dhaabatu mormasaa dheeressee ijaan barbaadaa hiriyaasaa ta’uu hin oolu kan isa maddii; innis deebisee hidhiisaa ciniinnatee lafa rurrukutaa “Oddoo Qayyaafaati!” jedhaan. Sana booda wanta isaan dubbatan hin dhageenyee anis caccabaa gara oddoo Qayyaaffaafaattan fiigicha koo itti qabe. Lafti hodhaa migiraa fakkaattetti namni akka talbaa walirra mucucaata, akka simbira galgala mandhee isheetti galuuf kaatee wacee wal waccisiisa dhalli namaa wal keessa hulluuqee. Eenyumtuu dabaree waliif hin laatu keessi guutee allis iddoon firii xaafii buusan hin jiru; “Godhiif, godhiif, sirriitti naqabbaneessi, qaccee dachaafadhuu godhiif, fannisi, fannisi, kan tokko danfu kan biraa hin dhagahu, walhunkuruu, walirraan koranii bu’uu. Hamma onneen koo dhoohuttan warra wal hunkuru sana dhiibeen gara oddoo sanatti olseene, iyyan keessaa fuudhe; ani namuu hin agarre ana kan arge baay’ee dha, anas uleen, kaballaan najoonjessee lafti naan mareen daddarbameen dallaa maddiitti kufe. Karri imimmaan kootii ammas baname, nan gangaladhe, nan mammadaa’e dallaattan of buuse. Dargaggeeyyiin Roomaa reebicha qacceetiif qofa leenji’an fakkaatan, waardiyyoonni Qayyaaffaa hamma Gooliyaad gagga’an wal harkaa fuudhaa akka bakakkaa irratti bu’u; qacceen yommuu dhumu qaccee haaraa bakka buusaa, humnisaanii yommuu dadhabu humna haaraan bakka buusaa gidiraa hammana hin jedhamne irraan gahan. Dafqi addasaa irraa yaa’ee fuulasaa dhokseera; fuullisaa dhiigaan haguuggameera. Halkan guutuu reebamaa akka bule sirriitti beekama; wayyoo gara jabeessa ilma namaa! Wayyoo ilma namaa gatii hin qabne, wayyoo gowwummaa dhala namaa jechaan… galaana imimmaaniitin liqimfamte.
Anis of to’achuu dadhabeen boo’aatiin barreessa, naboossiste, ana qofaa miti qalamnikoos ni boossi, halluu osoo hin ta’in jireenya lubbuu, jaalala lubbuu; maal ta’a anis Gooftaa kootiif kan naaf du’eef, Gooftaa Dhiigasaa naaf lolaaseef, Foonsaa naaf laateef, jaalala isheen Isaaf qabdu kana xiqqoosheellee ta’u osoon qabaadhee jedhee inaafeen boo’e. Jaalala isheen Gooftaaf qabdu kana maal ta’a dhalli namaa hunduu osoo qabaatee cubbuu kan jedhamu osoo lafarraa haqamee jiraateen jedhe keessa kootti.
“Rufiinos” jettee jalqabde dubbii haaraa; “…….iddoo sanii socho’uun dadhabe, kuun na arrabsa, kuunsaa kaballaa na affeeraa, kan hafe immoo si’is itti dabaluudhaaayyuu jechaa natti dheekkama, tokko tokko immoo saree, maal abbaashii hojjetti asii? Naan jedha…. garuu garuu obboleessakoo Rufiinoos jaalalli waan hundaa nama dandeessisa, hundumaa nama obsachiisa, gidiraan soogidda jaalalaati. Jaalala Uumaa keetiif qabdu mee sirriitti xiinxalii ilaali duubaa fi fuulduratti gonbisaa; cancalaan/ sansalataan harkaa fi dugda Isaa hidhanii; gara oddoo Philaaxos reebaa geessan. Gidiraan Inni yeroo sana arge, dhiphinni Inni yeroo sana arge, dhukkubbiiwwan yeroo sana isarratti raawwatame sana boodas sana duras eenyurrallee hin geenye hin ga’us, dugdisaa cancalaan hidhamee kan fuuldura jiran yommuu humnaan harkisan warri duubaa immoo yemmuu gadhiisan ciirracha mana Qayyaaffaatii eegalee hanga Qaraaniyoo jiru isa akka qaruuraa caccabsanii ogummaadhaan dallaa irratti dhaabaan fakkaatu sana irratti fuulaa fi qomaan yommuu gonbifamu kuun yommuu irra ejjetanii darban kuun immoo ka’i jedhanii lafatti Isa reebu, isaan caalaa hamoo kan ta’animmoo ciirracha seefa fakkaatu sanarra harkisaa reebu; kan jalaa fagaate immoo dhagaadhaan darbatanii, kan kana hundaa dadhaban immoo arrabsuudhaan akka waan arraba isaanitiin du’uu, hamma laagaan isaanii cituuf ka’utti iyyaa arrabsu. Hubadhukaa nu’iif jecha Gooftaan ba’aa gidiraa sana hundaa baate, nadarbanii anas yommuu nagombisan tiradhee ka’een fuul durattan kaadha; amma anis of hin beeku, oolmaan Inni naaf oole, kan Inni naaf raawwate onnee koo keessatti chaappa’ee waan jiruuf. Ana kanan jibbamee fi kanan tuuffatamee namaa gadi ta’e, Isatu lakkoofsa namaa keessa na oolchee ol naqabee, nafayyisee tarree namaa nadhaabe waan ta’eef yoomis jaalallisaa lapheekoo keessatti chaappeeffame waan ta’eef; dadhabee irraa fagaadhus garuu hafuu hin dandeenye boo’aan sussuka malee. “Jaalala kanarraa maaltu adda nabaasaree…”(Rom.8፥35). Daandiirratti obboloota shamarranii argadheetan isaan waliin boo’aa gara oddoo Philaaxoos qajeelle. Achittis immoo wayyoo, baay’inni reebicha ulee, iyyi sagalee qaccee fi gara jabeenyummaan warroota reebanii imimmaan nama fixachiisee dhiiga nama boossisa; qaamni Isaa guutuun ni rom’a, Foonsaa irraa dhumeera lafeetu lakkaawama. Obsasaa, tolummaasaa yommuu qalbiidhaan madaaltu eenyummaakee gatii badi badi badi siin jedha. Isa boodammoo gonfoo qoree itti gonfachiisanii guddaanis xinnaanis hamma humna isaanii Isa rukutu, itti baacu, Fannoo irratti fannifamu baatee, dafqi dhiigasaa waliin walmake cophsaatii gaara yommuu ol ba’u… maal jedhuree…maal jedhuree…imimmaan ishee akka galaanaatti lola’a. Sana booda uffata Isaa irraa baasanii; ammas reebichaan foon Isaa erga irraa fixanii jechuun ni danda’ama harkasaa lamaan diriirsanii akka fannoo dhaqqabuuf jedhanii foo’aa jabaataadhaan erga hidhanii booda miilla Isaas miila fannoo irratti hidhanii jetteet, Imimmaaniifuu akka seenaatti osoo hin ta’iin akka waan amma chankaarichaan waraanaa jiranii itti fakkaatee, harka lamaan mataa qabattee iyyuu eegalte, anis imimmaankoo funyaan koorraan cophee biraannaa jiisuu eegallaan biraannaakoo walitti dachaasee boo’aa ishee tasgabbeessufan ka’e; akkuma ta’etti tasgabbeesseen haala chinkaaraan waraanamuu sana dhiistee, sana booda haala jiru akka natti himtun jajjabeesse….. wayyoo ija akkamiitu namaaf ilaaala, yeroo Inni iyyu dhagaheetan anis guurrakoo lamaan qabadhee, uuuuu… uuuuu… uuu.. jedheen afuurri nakeessaa qixxooftee sa’aatii walakkaadhaaf ofin wallaale…. wayyoo uumaakoo, anaaf jettee, galaanni imimmaanii ammas irra dhangala’a, fuullishee zayituuna bilchaatee ququnca’e fakkaateera. Jaalalli isheen Isaaf qabdu madaallii kootii ol ta’een imimmaankoo naaf dhaabachuu dide; Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos isheen jireenyashee guutuu boochuuf kun amma reefu laphee koorrattii bocame, jaalalli isheen Isaaf qabdu amma laphee koorratti cophuu eegale, dhuguma jaalala dhugaa kan jaalate qofatu beeka… ammas boossee, boossee akkana jetteet itti naaf fufuu eegalte. Anis laphee fi barreessituu kootiin hordofuun eegale, akkana jettee eegalte, “Tasa raajiin addaa tokko ta’e, aduun dukkanoofte, addeessi dhiiga uffatte, urjiin ni harcaate, dacheen urgufamtee, warroonni du’an awwaala keessaa olkaka’anii gara magaalattiitti galanii baay’eewwanitti muul’atan (Mat 27፥45-53). Gooftaan keenyas “Xummurame!” jedhee du’a keenya nuuf du’ee lubbuusaa nuuf laate.
Yooseef kan jedhamu inni biyya Armaatiyaasii fi halkan halkan Gooftaa bira dhufee kan barachaa ture Niqoodimoos uffata haaraadhaan kafananii Awwaala haaraa Yooseef ofii isaatiif qopheesse kan namuu itti hin awwaalaminitti Gooftaa awwaalan. Guyyaa sadaffaatti nan ka’a jedhee waan tureef bultii jedhamu hin bulle, hamma Du’aa Ka’uu Isaa agarrutti midhaan hin nyaannu, bishaan hin dhugnu jennee waadaa waliif galleera. Gara galgalaa yommuu xinnoo dukkanaa’uu eegalu Golgootaa ilaaleen ifaan ibiddaa bakka bakkaa ni ifa, Loltoonni Roomaa of eeggannoodhaan awwaalicha eegaa jiru. Anis isaan sodaadhee turuu hin dandeenye… Obboleessa koo Rufiinoos halkan Du’aa Ka’umsaa hamma geessutti; gidiraan, dhiphuun, dafqi dhiigaan makame sun, yommuu natti yaadatamu osoon hin beekiin yaadaan nafudhatee Qaraaniyoo nageessa; jaalalasaa yommuun yaadadhu, waamichi Gooftaan koo yommuu natti yaadatamu; gabrummaa cubbuu irraa, hidhaa diyaabiloos irraa, kanan hiikkadhe, guyyaan fayyinakoo sun yommuu natti yaadatamu yaadaan balali’eetan Golgootaatti of arga. Akkuma ta’etti sanbanni naaf halkanaa’e ani garuu nan taa’a; obboloonni koo warri shamarranii
“Maal ta’a osoo xinnooshii raftee? naan jedhanii nalolan; haamilee isaaniif jedheen xinnoo hirkadhe, garuu hin rafne, nan dunuunfadhe garuu sanyiin hirriibaa ijakootti hin dhufne. Yaadnikoo kan jiru Golgootaadha; ammas ammas oddoo Qayyaaffaatii eegalee hanga Qaraaniyootti ta’iin guyyaa sana ta’e akka marsaa dhiigaa sana nakeessa deddeebi’a. Sa’aatiin waan fagaate natti fakkaata nan ka’e, gara balbalaattan achi hiiqe, hulaa balbalaa keessan ijakoo tokkicha dunuunfadheen isa tokkoon gara alaa ilaale, dukkanni isaa sinyaadhuu kan namaan jedhu fakkaata; ta’us nahin dandeechisne, balali’i, balali’i gara Golgootaa; yaanni jedhu dhufee sammuukoo naguute. Suuta jedheen akka warroonni rafan nahin dhageenyettan; hoggoraa/cufaa balbalaa banadhe, iyyi sarootaa gama sanaa darbee darbee ni dhagahama kanaan ala homaa hin dhageenye.
Halkan halkan qofa ifa warra bahaa jedhamee kan waamamu ifaan daandiirra qofti takkaa ifee takkaa immoo dhaama; balbala xinnoo akka gadi deebisuu godheetan, naanna’ee ilaalee, kallattii daandii Qaraaniyoo qabadheen fiigicha guyyaa fiigan dukkana dimimmisaa sana keessa irraa kaadhe. Hirriiba nadhorkekaa; Gooftaan ka’ee hamman argutti, hawwiin keessakoo muddee jiru awwaalicha ilaaludha.Waardiyyoonni Roomaa tasallee natti hin yaadatamne, sodaan waraabessaa sammuutti nahin dhufne, ani halkan sanas akka guyyaattan fiiga gara Qaraaniyoo; fagoodhaa ifaan takkaa baddee takkaammoo iftu natti muul’atti; Loltoonni Roomaa eegumsarra waan jiraniif; amma isaan ta’uu hin oolanin jedhe. Si ajaa’iba yaa obboleessa koo Rufiinoos; loltoonni Roomaa jiraatanii dhiisanii yeroo sana kun dhimmakoo hin turre.
Akkuma beektummoo daandiin Golgootaa salphaa miti. Kattaa dhidhiita’aa akka qaruuraa caccabee fakkaatu takkaa yoo siwaraane hidda dhiigaa kan walitti nama butu sanatu itti baay’ata. Qoreen yommuu qoloo koo /wandaboo koo narratti ciru, miilakoo yommuu na mummuru, qeensa miila kootii yommuu narraa buqqisu, yoom natti dhagahame, kunoo argitaa quba guddaa lachuurra qeensikoo hin jiru jettee kopheeshee baafattee yommuu natti agarsiiftu; dhugumaayyuu qeensi jalqabaa irra hin jiru isa lammaffaa deebi’ee margetu jajal’atee muul’ata malee; egaa, kun hunduu yaadannoo guyyaa saniiti naan jette. Amma achi dhiyaadheera, loltoonni Roomaa awwaalicha eegan rafaniiru; ibiddi garuu ni boba’a, halkanis dabareesaa bariif laachuuf dhumaa jira, samiin daalachaa’eera. Suuta jedheen gara awwaalichaatti hiiqa yommuun jedhu; sokoksa miila kootii dhagahanii eegdonni kun dammaqanii wal dammaqsuun; yeroo tokkotti gara kootti nanna’an. Achumaan ijaan fi harkaan wal waamanii, gara awwaalichaatti ariitii cimaadhaan daddarbamaa qixa kootiin dhufan, anis rifadheen maddii tokkotti achi hirkadhee dhaabbadhee haala isaanii ilaalaa tureen yeroo isaan rifatanii burjaaja’an anis rifaatuun isaanii narifachiisee; suuta itti hiiqe yommuun gara boolla awwaalichaa ilaalu; dhagaan awwaala irraa konkolaateera, awwaalichis banameera, urgufamaa gara keessaa yemmuun ilaalu duwwaa dha. Uffata Yooseefii fi Niqoodimoos ittiin kafanan qofatu boolla keessa jira. Gooftaakoon dhabe, imimmaankoo akka burqaa gannaa tasa dhangala’u maddiikoorraa lola’e amma carraa biraa hin qabu; deebi‘eetan gara Iyyaruusaalemittan fiige, gara Duuka Bu’ootaaf; Gooftaan keenya akka awwaala keessa hin jirreen itti hime, yeroo kana Pheexiroosii fi Yohaannis dafqa offirra kutanii battalatti achi ga’an; kan dursee achi ga’e garuu Duuka Bu’aa Gooftaan jaalatu jedhamee kan dubbatameef Yohaannis ture. Ta’us, Pheexiroosiin dursee hin seenne. Anis lammaffaan hamma humna kootii duuba sussukaan deebi’e. Akkuman jedheen awwaala duwwaa qofatu jira. Pheexiroosii fi Yohaannis garanaa fi garas barbaadanii dhabnaan deebi’anii deeman; ani garuu, boo’aatii achuman ture. Gooftaa koo osoon hin argatin, Uumaa koo dhabee hin deemu jedheen achuma taa’ee boo’uun jalqabe. Daandiin eebba Waaqayyoo ittiin argatan obsa qofa akka ta’e bareera. Ka’eetan ammas boo’aatii gara boolla awwaalichaattan qajeele. Gadi jedhee ammas gara awwaalichaa yommuun imimmaankoo haqachaa ilaalu, Ergamoonni lama uffata cabbii caalaa addaatu uffatanii tokko awwaalicha gara jalaa tokko immoo gara gubbaa dhaabataniin arge. Tokkichi akkana jechuun natti dubbate ‘‘Maaliif boossa, eenyuun barbaadda?’’ naan jedhe; sagaleenkoo imimmaaniin ciccitaa; Gooftaa koo fudhataniiru eessa akka geessan hin beekun jedheen. Kana jedhee balbala awwaalichaarraa gara duuba kootti yommuun miil’adhu; nama dhaabbatu tokkon arge. Eegduu ashaakiltootaa natti fakkaateen itti hiiqee; Innis “Dubartiinana maaliif boossa eenyus barbaadda?” naan jedhe; Anis maaloo fudhatteetta yoo ta’e natti himi eessa akka goote natti agarsiisi urgooftuu dibuufanii jedheen; sagaleenkoo ciccitaan hinqirfadhee boo‘aa. Innis “Maariyaam” jedhee sagalee ani Isa beekuun maqaakoo nawaame, rifaatuudhaan fuullikoo ifaan anis “Rabbuunii” (Yoh20፥1-18) jedheen. Edaayyu isumatu Gooftaa koo dha. Gammachuudhaan machaa’een gara isaatti fiige “Amma na hin tuqin” gara Abbaakoof gara abbaa keessanii ol hin baanee; garuu, deemiitii obboloota Koo obboloota keetiin gara Abbaakoottan olba’a jedheera; jedhii itti himi naan jedhe. Gammachuu sana akkamitti ibsu, gadda guyyoota sana hundaa sekondii sana keessatti nakeessaa haxaa’ee baase; akkuman lapheekootii boo’ee hawwettan; Du’aa Ka’umsa Gooftaa kootii argee sagaleesaas dhagahee; fuullikoo gammachuudhaan biiftuu ganamaa fakkaatte. Gara Iyyaruusaalem, gara obboloota kootii gammachuudhaan burraaqaa, takkaa faarfachaa takka immoo boo’aa (boo’icha gammachuun) as qajeele. Nan kaadhe sila fiigicha gaddaa fi boo’ichaa amma immoo seenichi jijjiirramee; fiigicha gammachuu fi kolfaa; Gooftaa keenya argeeran jedheen; hundumtuu rifatan. Kan natti hime hundumaan itti hime, naanna’eetan oduu missiraachoo kana hundumaa dhageessise, Du’aa Ka’uu Gooftaa keenyaa. Egaa, ilaalikaa yaa Obboleessa koo Rufiinoos; Gooftaankoo na hin irraanfannee, Ifa Du’aa Ka’umsasaa sanyii dhala namaa hunda keessaa filee jalqaba anatti muul’ate. Egaa jaalallisaa onnee koo keessatti chaappeffamee Ifa Du’aa Ka’umsasaa hanga arguutiin na ga’e. Anis Nagaatti jedheenii yemmuun deemuuf ka’u wanti keessummaan tokko onnee koo irratti bocamee ture. Jaalallii, Amantii fi Obsi hanga oliitti nama geessa kan isheen naan jette jaalala dinqisiisaa akkamiiti! Bara kana jaalalli dhugaa kana fakkaatu eessumallee hin jiru. Guyyaa jalqabaa guyyaa fayyinaa sanarraa eegalee hamma iddoo Awwaalaa Golgootaatti; keessattuu imimmaaniin kan nama miiccu, galaana jaalalaa kan nama daaksisu jaalala ajaa’ibaa; “Jaalallii, Amantii fi Obsi hamma dhumaatti nama geessa” kan isheen naan jette anas CHAAPPAA JAALALAA yoomillee hin arraanfatamneen; onnee koo irratti bocee imimmaaniin narratti mallatteessitee nagaggeessite, anis boo’aatii Biraannaakoo maradheen, Imimmaaniin jaalala Kiristoos chaappeffadheen nagaatti jedhee gara biyya kootti imalakoo…
Maddi: – Veenasiyaa
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2019-04-24 08:37:382019-04-24 08:37:38JAALALA ONNEERRATTI CHAAPPEEFFAME
Qorumsawwan sadeen (Maat. 4:1-11) Seenaan akka hin Komatamneef Tajaajila Afuurawaaf haa tattaaffannu!